ဘိုးအင်း 737-8 MAX & ဘိုးအင်း 737-9 MAX
မေးခွန်း ဘိုးအင်း 737-8 MAX & ဘိုးအင်း 737-9 MAX
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #361 by Colonelwing
ဘိုးအင်း 737-8 MAX & ဘိုးအင်း 737-9 MAX NEW Advanced
ဒါကြောင့်ငါကအပေါ်ဆင့်သွားသည်မဟုတ် ,,, Boeing မပါရှိဘူးဆိုရင်!
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #368 by Gh0stRider203
Colonelwing wrote: ငါကအပေါ်ဆင့်သွားသည်မဟုတ် ,,, Boeing မပါရှိဘူးဆိုရင်!
non-Boeings အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း VA သို့၎င်း Concorde တစ်ဦးက C-130 C-123 DC-10-30F, ERJ-145, ER600 ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်သာ (ငါဝန်ခံရမယ်သောအဆင်းလှသောလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်!) နှင့် Dash-8 (ငါဂုဏ်နင့်များအတွက် aircraft.cfg file ကို edit ဖို့ရှိသည်) ။
C-123 အမှန်တကယ်အဘယ်သူ၏အဘ၏နောက်ဆုံးပျံသန်း 123, ဇွန်လ 27 အပေါ်တစ်ဦးက C-1965 အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်မိုင်းတစ်မိတ်ဆွေကောင်းဖို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကသူနေဆဲဗီယက်နမ်ကနေလှုပ်ရှားမှုခုနှစ်တွင်ပျောက်ဆုံးနေအဖြစ်စာရင်းဆက်လက်ရှိနေသူအများအပြား၏တဦးတည်းပါပဲ။
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #370 by Colonelwing
အတော်များများကကြောင်း Period မှာ Pow / MIA လုပ်ခဲ့တယ် ...
သင်၏အဆွေခင်ပွန်းဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ပေါ်မှာအတိတ် ,, ဆုံးရှုံးခဲ့ရ ...
အဆိုပါ Fairchild C123 "ပေးသူက" ညဥ့်တိုက်ခိုက်သည့်စနစ် / သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခဲ့သည်
Chase လေယာဉ်ကဒီဇိုင်းတစ်ခု All-သတ္တုဟေုနျစီးပေါ်တွင် အခြေခံ. လေယာဉ်ပျံ။ အဆိုပါ
လေယာဉ်ပျံရဲ့ C123B ရှေ့ပြေးပုံစံပထမဦးဆုံးစက်တင်ဘာလ 1, 1954 အပေါ်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။
အမည်: ကားလ်အက်ဒ်ဝင် Jackson က
ရာထူး / ဌာနခွဲ: O3 / အမေရိကန်လေတပ်
ယူနစ်: 1st ပျံသန်းမှု Detachment,
MACV-SOG 1131st အထူးလှုပ်ရှားမှုများတပ်မှ,
မွေးဖွားခြင်း၏ date: 28 ဇန်နဝါရီလ 1930
စံချိန်တင်၏နေအိမ်စီးတီး: Natchitoches LA က
ဆုံးရှုံးမှုများ date: 27 ဇွန်လ 1965
(1973 အတွက်) status: ပြန်လည်မလှုပ်ရှားမှု / ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသေဆုံး
USAF ဗိုလ်ကြီး။ သူ Carl အီးဂျက်ဆင်
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #375 by Gh0stRider203
တကယ်တော့ 27 ဒီဇင်ဘာလ 1972 အပေါ်မြောက်ဗီယက်နမ်ကျော်ပစ်ချခံခဲ့ရသူတစ်ဦးဗိုလ်ကြီးရော်နယ်အောင်နိုင်ဒဗလျူ Forrester, USMC များအတွက် Pow / MIA လက်ကောက်ဝတ်။ သူကတစ်ဦးတစ်ဦးက-6 ကျူးကျော်ပေါ်တွင်ရေကြောင်း / Bombardier ဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့နှစ်အနည်းငယ်ပြန်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကနေတဆင့် facebook ကိုအပေါ်သူ၏သမီးနှင့်အတူမိတ်ဆွေများကိုဖန်ဆင်းပါတယ်, နှင့်ကတည်းကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူမ၏ဖခင်အားဂုဏ်ပြုတစ်ခုခုပွုပါပွီ။ ငါ 13 နှစ်ပေါင်းယခုကြောင့်လက်ကောက်ဝတ်ဆင်ပါတယ်။
0.316 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်